स्वास्थ्यमा दुई सचिव तितो विगत– बलियो मन्त्री, कमजोर प्रशासन – Health Post Nepal
२०७५ पुष १३ गते ११:०४
सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सुरु भएको विवाद पछिल्लो समय मत्थर हुने बाटोतर्फ अग्रसर भएको धेरैको अनुमान छ ।
दुवै सचिवको कार्यकक्ष विवाद मिलिसक्यो, केही दिनमा जिम्मेवारी पनि मिल्छ, अनि सबै सहज । एउटा मन्त्रालयभित्र दुई सचिव अनुमान गरेजस्तो सहज होला त ? त्यसमा पनि स्वास्थ्यमा यसअघि नै दुई सचिव हुँदाको समयलाई नजिकबाट नियालेकाहरू यसलाई ठूलो समस्याको सुरुवात ठान्छन् ।
मन्त्रालयमा दुई सचिव भएपछि सुरुमै कार्यकक्ष विवादले नै भविष्यको संकेत गरेको छ । सुरुमा अदालतको आदेश पाए पनि डा. पुष्पालाई मन्त्रालयमा पुरानै कार्यकक्ष तर भूमिकाशून्य बनाएर राखिएको थियो । मन्त्रालयले यसबीचमा १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालयको काम अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले प्रशासनका केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेपछि भने विवाद बढेको थियो ।
अधिकारी आएको केही दिनमै सरकारी भ्याकेटलाई अस्वीकृत गर्दै दोस्रोपटक पनि अदालतले आफ्नो पक्षमा आदेश गरेपछि भने चौधरीले बाहिर बोर्ड अधिकारीको भए पनि कार्यकक्ष कब्जा गरेकी थिइन् । पछि मन्त्रालयले अधिकारीका लागि अर्कै कार्यकक्ष व्यवस्था गरेको छ । अधिकारीलाई कार्यकक्ष र जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले डा. चौधरीलाई कार्यकक्षमा मात्रै सीमित राखेको अवस्थामा अनुमान गरिएजसरी विवादको गाँठो फुक्ने अवस्थामा छैन ।
सचिव अधिकारीले स्वास्थ्यबाट फिर्ता हुन चाहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता गरे मात्रै तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सचिव विवादको समाधान मन्त्री र सचिवको सम्बन्धमा निर्भर हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार सचिव अधिकारीले स्वास्थ्यबाट फिर्ता हुन चाहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता गरे मात्रै तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सचिव विवादको समाधान मन्त्री र सचिवको सम्बन्धमा निर्भर हुनेछ ।
यसअघि डा. दीर्घसिंह बम र डा. सुधा शर्मा र पछि डा. सुधा र डा. प्रवीण मिश्रले स्वास्थ्यमा एकै समय सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । डा. शर्मा र डा. मिश्रको कार्यकालमा दुई सचिवबीचको विवादले चरम रूप लिएपछि डा. शर्माले अढाइवर्ष कार्यावधि बाँकी छँदै राजीनामा गरेर हिँड्नुपरेको थियो ।
केही वर्षअघिसम्म स्वास्थ्य, अर्थसहितका मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी रहे पनि पछिल्लो समय अर्थमा मात्रै दुई सचिवको दरबन्दी कायम थियो, अर्थ र राजस्व सचिवका रूपमा ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयमा दुई सचिव कायम रहेको देखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी स्वास्थ्यमै कायम भइसकेको वा हुन बाँकी रहेको भन्ने यकिन भएको छैन । यद्यपि, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रशासनतर्फका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रशासन तथा जनसंख्यातर्फको जिम्मेवारी र डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिने बताएका छन् ।
अहिले पनि दुई सचिवमध्ये डा. पुष्पा चौधरीले आफ्नो पुरानै कार्यकक्ष पाए पनि फाइलहरू पाएकी छैनन् । डा. चौधरीले मन्त्रीले म फर्केपछि मिलाउँछु भनेको र अहिलेसम्म आफ्नोमा कुनै फाइल नआएको बताइन् । ‘अदालतले पुरानै ठाउँ र जिम्मेवारीमा फर्काउनू भनेपछि यसअघि मैले गर्दै आएको सबै कामको जिम्मेवारी मेरैमा आउनुपर्ने हो,’ चौधरीले हेल्थपोस्टसँग भनिन् ।
दुई सचिव हुँदा समस्या पर्दैन त भन्ने प्रश्नमा चौधरीले अदालतले आफूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काइसकेपछि अधिकार पनि पुरानै हुनुपर्ने बताइन् ।
प्रशासनतर्फका सचिव अधिकारीले भने आफूकहाँ निर्णयका लागि प्रर्याप्त फाइल आइरहेको सुनाए । सचिव अधिकारीले आफू सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको संकेत गरे । ‘म त सरकारले खटाएरै स्वास्थ्यमा आएको हो, अब पनि सरकारको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्छु,’ उनले भने । यसबीचमा एउटा सचिवकहाँ फाइल जाने तर अर्कोकोमा नजानुले विवाद अन्त्य भइनसकेको देखाउँछ ।
पहिलोपटक १९ वैशाख ०६७ मा दुवै सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदासम्म मन्त्रालयमा दुई सचिवबीच तत्कालीन मन्त्री उमाकान्त चौधरीले धेरै खेलिसकेका थिए । जानकारहरूका अनुसार अर्को सचिवको तुरूप देखाएर उनले सुधासँग धेरै गलत निर्णय गराउन नसकेपछि अन्ततः उनले मन्त्रिपरिषद्बाट जिम्मेवारी हेरफेर गराएका थिए ।
दुई सचिवका ती दिन : प्रशासनको हार, राजनीतिक नेतृत्व हाबी
चिकित्सकमध्येबाट सचिव हुने अवसर पाएका डा. निराकारमान श्रेष्ठले झन्डै २ महिना लामो नेतृत्व सम्हालेपछि लामो समयसम्म डा. विष्णुप्रकाश पण्डितले निमित्तमै चित्त बुझाएर अवकाश पाए । त्यसपछि डा. दीर्घसिंह बम र डा. सुधा शर्मा ७ कात्तिक ०६५ मा एकैदिन क्रमशः स्वास्थ्य र जनसंख्यामा कामु सचिवको जिम्मेवारीमा आए । त्यसपछि सरकारले डा. बमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा तानेर डा. शर्मालाई ९ साउन ०६६ मा स्वास्थ्यसचिव बनायो । जुन दिन डा. सुधाको स्वास्थ्यमा इन्ट्री भयो, सोही दिन जनसंख्यामा पदस्थापन हुने गरी डा. प्रवीण मिश्र पनि सचिव भए ।
पछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा ११ महिनामै डा. प्रवीणले जनसंख्यातिर सर्नुपर्यो । २८ चैत ०६७ मा फेरि स्वास्थ्यमा डा. शर्मा र जनसंख्यामा डा. मिश्रको सरुवा भयो ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले सुधालाई स्वास्थ्यमै कायम राख्छु भनेका थिए । केही समयअघि हेल्थपोस्टसँग सुधाले भनेकी थिइन्, ‘मैले मन्त्रीलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने म बिदामा बसिदिन्छु, तर स्वास्थ्यबाट मलाई नहटाउनुस् भनेको थिएँ । मन्त्रीले पहिले हुन्छ भने, तर पछि थाहै नदिई दोस्रोपटक जनसंख्यामा सारिदिए ।’ दुई सचिवको अन्तरकलहमा खेल्न महतो पनि पछाडि परेनन् ।
त्यसपछि अढाइ वर्ष बाँकी रहँदै सचिव पदबाट राजीनामा दिएको भनाइ डा. सुधाको थियो । सरुवाको निर्णयपछि डा. शर्माले ९ पुसमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।
‘दुई सचिव हुँदा लिखित रूपमै अधिकार बाँडे पनि फाइल तलमाथि गर्न नसकिने होइन,’ मन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘अब दुई सचिव हुँदा हामीलाई समस्या छैन, सचिवलाई समस्या भए सरुवा लिएर जान्छन् ।’
त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्यमा एउटा मात्रै सचिवको दरबन्दी बनाएपछि डा. मिश्रले पूर्ण अवधि एक्लै र बलियो सचिवका रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिए । त्यसयता अस्थिरता मात्रै रोकिएको छैन, अन्यत्र दरबन्दी नभएको र सरुवा गर्नसमेत नमिलेकै कारण स्वास्थ्यसचिव कतिपय अवस्थामा मन्त्रीभन्दा बलिया साबित हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय अदालतले समेत स्वास्थ्यसचिवको अन्यत्र सरुवामा कानुनी आधार नभेटेको आदेश गरेपछि स्वास्थ्यमा दुई सचिव नहुँदा मन्त्रीभन्दा सचिव ‘पावरफुल’ बन्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अन्यत्रका सचिवलाई कम्तीमा सरुवा हुन्छ भन्ने डर छ, तर स्वास्थ्यसचिवलाई त्यो पनि नभएपछि मन्त्रीलाई समेत गन्दैनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारीले भने, ‘अब अदालतबाट फर्केपछि दुई सचिव नहुने हो भने मन्त्रीले हैन, सचिवले मन्त्रालय हाँक्ने अवस्था आउँछ ।’
उच्च अधिकारीको यो त्रासजस्तै मन्त्री पनि आफूअनुकूल र आफ्नो गतिअनुसारको कामका लागि पनि अनुकूलका सचिव चाहन्छन् । त्यसका लागि हालका मन्त्री यादव पनि डा. पुष्पाले सहकार्यको सम्झौता नगरेको हकमा दुवै सचिव राख्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘दुई सचिव हुँदा लिखित रूपमै अधिकार बाँडे पनि फाइल तलमाथि गर्न नसकिने होइन,’ मन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘अब दुई सचिव हुँदा हामीलाई समस्या छैन, सचिवलाई समस्या भए सरुवा लिएर जान्छन् ।’